Bitcoin Hardforks यो के हो? - Blockchain समाचार
Bitcoin Hardforks यो के हो?
बिभाजनमा के हो?
यो Bitcoin नेटवर्क यो cryptocurrency को आगमन देखि काँटाहरू धेरै मार्फत भएको छ 2008. यी काँटाहरू यस्तो scalability रूपमा समस्या समाधान गर्न विकासकर्ताहरूले मदत मानिन्छ थिए, टीपीएस कम क्षमता (प्रति सेकेन्ड कारोबार), सीमित ब्लक आकार, र सामान्य मा Bitcoin नेटवर्क अधिभार सुविधा. Bitcoin खुला स्रोत सफ्टवेयर हुनुको साथ, नेटवर्कमा कुनै पनि प्रयोगकर्ता प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ, परिमार्जन, र कोड आफ्नै नियम परिचय. यसरी, कुनै पनि प्रयोगकर्ता काँटाहरू हुन मानिन्छ नयाँ प्रोटोकल र चेन सिर्जना हुन सक्छ, नेटवर्क को अर्थात् नरम वा hardforks.
Softfork पुरानो श्रृंखला को नोड्स सञ्चार देखि एक नयाँ श्रृंखला को नोड्स रोक्दैन भन्ने blockchain प्रोटोकल मा एक उल्टाउन परिवर्तन छ. सबै भन्दा राम्रो softfork उदाहरण अलग साक्षी वा SegWit छ. नेटवर्क प्रयोगकर्ताहरूले कम स्मृति ठाउँ कब्जा हुनेछ भनेर ब्लक लेनदेनको संरचना अनुकूलन गर्न अगस्ट यो softfork सक्रिय छन्. को Bitcoin नेटवर्क को काम परिवर्तन बिना जानकारी पकड ब्लक लागि अनुमति दिइएको softfork.
Hardfork नयाँ नियम पुरानो blockchain प्रोटोकल नमिल्ने हुँदा गठन भएको एक नयाँ नेटवर्क श्रृंखला छ. यस मामला मा, नयाँ र पुरानो नेटवर्क को नोड्स गर्न सक्षम छैन “कुराकानी,” hardfork सहमति संयन्त्र नै परिवर्तन implies देखि. hardforks को मद्दतले, नेटवर्क प्रयोगकर्ता यस्तो कम नेटवर्क ब्यान्डविथ भनेर प्रति सेकेन्ड र सीमित ब्लक आकार सात लेनदेन सम्म प्रक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ रूपमा Bitcoin नेटवर्क प्रमुख समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्ने, धेरै अनुसार, भन्दा बढी पकड गर्नुपर्छ 1 एमबी डाटा. Hardforks पनि प्रयोगकर्ता नयाँ cryptocurrencies सिर्जना गर्न अनुमति, Bitcoin गर्न विकल्प रूपमा.
विगत hardforks परिणाम
Bitcoin XT पहिलो Bitcoin नेटवर्क hardfork छ, जो को अगस्ट मा आयोजित थियो 2015. को hardfork, जो Bitcoin कोर को स्रोत कोड आधारित छ, गर्न ब्लक आकार वृद्धि गर्ने थियो 8 एमबी, जसबाट गर्न नेटवर्क ब्यान्डविथ अप वृद्धि 24 प्रति सेकेन्ड लेनदेन, तर cryptocurrency को खानी समुदायको आवश्यक सहयोग पाउन थिएन. Bitcoin XT लागू गर्न यो आवश्यक 75% सबै Bitcoin नेटवर्क Miners नयाँ नेटवर्क प्रविष्ट गर्न, तर मात्र 12% तिनीहरूलाई को hardfork समर्थित. यस सन्दर्भमा, माइक Hearn मुख्य विकासकर्ताहरूले को एक आफ्नो cryptocurrencies बेचिएको र परियोजना बायाँ मा 2016. फलस्वरूप, मात्र 20 नोड्स मूल देखि बायाँ थिए 4,000 एकाइहरु, जो नेटवर्क त्यो क्षण मा उपलब्ध बनाएको.
Bitcoin असीमित hardfork मई मा ब्लक आकार परिवर्तन गर्न शुरू भएको थियो 2016, Miners भविष्यमा नेटवर्क ब्लक को आकार चयन गर्न प्रस्तावित थिए. Miners अनुसार, ब्लक को आकार विस्तार मात्र लाम हटाउनु छैन तर पनि ब्लक मा कुल आयोग शुल्क वृद्धि गरी आफ्नो लाभकारी सुधार. तर आलोचकहरु hardforks, जसलाई अधिकांश विकासकर्ताहरूले थिए, यो रणनीति Miners को ठूलो केंद्रीकृत पूल नेटवर्क विकास परिमार्जन गर्न सुरु भनेर संभावना वृद्धि सक्ने उल्लेख.
यो कि सीमित हार्डवेयर क्षमताहरु संग Miners नेटवर्क को विकास मा प्रभावकारी भाग लिन सक्षम छैन र लामो पूर्ण अधिक्रमित हुनेछ चाहनुभएको. यसरी, नेटवर्कमा धेरै पूल मा केंद्रीकृत हुने. विशेषज्ञहरु पनि Bitcoin असीमित सफ्टवेयर मा धेरै त्रुटिहरू फेला, जो पहिलो अप्रिल र त्यसपछि यो वर्ष को मे मा को पतन गर्न नेतृत्व 70% नेटवर्क मा बिन्दुहरुको, जसबाट यी काँटाहरू गर्न गुप्त समुदाय भरोसा undermining.
Bitcoin क्लासिक परियोजना Bitcoin नेटवर्क scalability समस्या सम्बोधन गर्न शुरू भएको थियो, जो Bitcoin XT hardfork द्वारा हल भएको थिएन. परियोजना को लक्ष्य गर्न ब्लक आकार वृद्धि गर्न थियो2एमबी र त्यसपछि गर्न4एमबी. तर यो hardfork को गुप्त समुदाय को आवश्यक सहयोग पाउन थिएन. को मा धेरै भन्दा धेरै सुरु 2,000 नोड्स परियोजना मा भाग लिए,” तर नम्बरमा गिरा 100 द्वारा 2017. नोभेम्बर मा यो परियोजना SegWit2X रद्द गरेपछि थियो गरिएको र परियोजना को डेवलपर्स खुल्लमखुल्ला समर्थित थियो Bitcoin नगद बन्द हुँदै थियो घोषणा गरेको थियो, नयाँ cryptocurrency.
Bitcoin नगद शायद सबै भन्दा प्रसिद्ध र सफल Bitcoin नेटवर्क hardfork छ. एक बाध्य hardfork प्रोटोकल को फलस्वरूप, Bitcoin नगद ब्लक मा देखा 478,558 मा 1 अगस्ट. बिभाजनमा रूपमा, बाट वृद्धि ब्लक आकार 1 एमबी 8 एमबी, र यो, बारी मा, कारोबार शुल्क नेटवर्क क्षमता वृद्धि र कम. hardfork पछि, Bitcoin धारकों आफ्नो ई-पर्स मा Bitcoin नगद एक बराबर रकम थियो. नयाँ नेटवर्क दुई blockchains मा भैरहेको कारोवारको सुरक्षा एक संयन्त्र प्रदान गरेको छ. आज, 13 डिसेम्बर, को Bitcoin नगद विनिमय दर छ $1,616.84 र वर्तमान तिहाई cryptomarket पूँजीकरण द्वारा राखिएको छ.
Bitcoin गोल्ड cryptocurrency ब्लक मा hardfork फलस्वरूप अक्टोबर को 24 मा देखा 491,407 हङकङ खानी दृढ चट्याङ्ग ASIC द्वारा बाहिर. परियोजना को लक्ष्य मूल Bitcoin भन्दा गैर-व्यावसायिक Miners लागि थप आकर्षक मुद्रा बन्न छ. यस सन्दर्भमा, नेटवर्क प्रयोगकर्ताहरूको एक ठूलो संख्या मेरो सक्नुहुन्छ Bitcoin गोल्ड र cryptocurrency आदर्श वाक्य छ “फेरि decentralized Bitcoin बनाउन।” पुरानो प्रमाण-को-कार्य प्रोटोकल hardfork initiators सट्टा नयाँ प्रयोग, Equihash. यो तर्कको अनियमित पहुँच स्मृति को आकार थप संवेदनशील छ (राम) cryptocurrency Zcash खानी गर्दा पनि प्रयोग गरिन्छ. आज, 13 डिसेम्बर, Bitcoin गोल्ड विनिमय दर छ $276.88 र बजार पूँजीकरण भन्दा बढी छ $4.5 अरब.
Bitcoin हीरा को hardfork छ, जो ब्लक मा नोभेम्बर को अन्त मा भयो 495,866. Bitcoin हीरा Miners मा काम प्रमाण को एक नयाँ अल्गोरिदम ब्लक सिर्जना (पाउ). पनि, यो cryptocurrency दस पटक गरेर धेरै पहिले एक भिन्न उत्सर्जन को मात्रा र ब्लक आकार मा वृद्धि 8 एमबी. विकासकर्ता यो hardfork गोपनीयता सुरक्षा को कमी जस्ता समस्या समाधान गर्न निमित्त विश्वास, ढिलो कारोबार पुष्टि, र नयाँ सहभागीहरू नेटवर्क प्रविष्ट गर्न को लागि उच्च सीमा. Bitcoin हीरा खानी नेटवर्क सिर्जना गर्न, ई-वालेटमा, नोड्स कोड, र API, GitHub मा खुला स्रोत कोड थप्न साथै वर्ष को अन्त द्वारा योजना छ.
सुपर Bitcoin, नयाँ cryptocurrency, मा देखा 12 डिसेम्बर, ब्लक मा Bitcoin नेटवर्क मा विभाजन को परिणाम रूपमा 498,888. सुपर Bitcoin आदर्श वाक्य छ “Bitcoin फेरि ठूलो बनाउन।” यो परम्परागत IČO सट्टा यो मंच निवेश आकर्षित नयाँ विधि प्रयोग उल्लेखनीय छ, भनिन्छ प्रारम्भिक काँटा प्रस्ताव (Ifo). को hardfork एकाइ सम्म वृद्धि प्रदान गर्दछ 8 एमबी. नेटवर्कमा एक प्रविधि चट्याङ्ग नेटवर्क micropayments असीमित नम्बर सञ्चालन अनुमति दिन्छ कि प्रयोग. यसबाहेक, सुपर Bitcoin नेटवर्क स्मार्ट अनुबंध चलिरहेको छ. विकासकर्ता टिप्पणी, तथापि, बिभाजनमा को गुप्त समुदाय इच्छा महसुस गर्न अभिप्रेरित र यसलाई बरु एक प्रयोग छ कि.
बिजुली Bitcoin - नेटवर्क विभाजन संभाव्यतः 23 डिसेम्बर ब्लक मा हुनेछ 499,999. नयाँ नेटवर्क को विकासकर्ताहरूले Bitcoin र ethereum को सबै भन्दा राम्रो गुण संयोजन गर्न चाहनुहुन्छ. यसरी, चट्याङ्गको नेटवर्क प्रविधि पनि नयाँ नेटवर्क मा micropayments र नयाँ DPOS पूरा लागि प्रयोग गरिने (प्रत्यायोजित शूलीमा प्रमाण) संयन्त्र सहमतिका लागि लागू गरिनेछ. गर्न एकाइ अप वृद्धि गर्न2एमबी, जो कारोबार गति वृद्धि हुनेछ र यो नेटवर्क स्मार्ट अनुबंध समर्थन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ. नेटवर्कमा पनि नयाँ ब्लक सृष्टिको एक गति वृद्धि लाग्न हुनेछ जो हुनेछ3सेकेन्ड. जबकि hardfork SegWit समर्थन गर्दैन, यो पटक कारोवारबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ. तथापि, यो टिप्पण लायक छ कि आउँदै सुरूवात मिति बावजुद, परियोजना एक काम वेबसाइट सेट अप गर्न अझै पनि छ.
राम्रो hardfork Bitcoin, चिनियाँ cryptocurrency निवेशक चान्डलर Guo द्वारा सुरु, ब्लक मा हुन छ 501,225, मा 25 डिसेम्बर. को व्यापारीले पूर्व-खानी उत्पन्न छैन भनेर भन्नुभयो, जबकि उत्सर्जन मात्रा मात्रा हुनेछ 21 लाख परमेश्वर. धेरै एक्सचेन्जहरू पहिले नै तिनीहरूले नयाँ cryptocurrency काम गर्नेछ भन्ने पुष्टि, जो एक एक एक अनुपात मा धारकों Bitcoin गर्न उपहार हुनेछ.
Bitcoin प्लैटिनम एक Bitcoin नेटवर्क hardfork रूपमा प्रस्तुत भएको थियो, जो ब्लक मा हुन मानिन्छ थियो 498,577 नयाँ cryptocurrency सिर्जना. तथापि, रूपमा Cointelegraph रिपोर्ट, को hardfork दक्षिण कोरिया बाट एक किशोरी द्वारा सिर्जना घोटाला छ, र मुद्रा नै भएको Bitcoin नगद कोड को पूर्ण प्रतिलिपि छ.
ZenCash को सह-संस्थापक, हनन Viglione को काँटाहरू blockchain विकास पर्याप्त चरण हो कि भन्ने विश्वास गर्छ:
खुला-स्रोत पारिस्थितिकी विकसित डिजाइन, मा-परियोजना सुधार वा काँटाहरू सम्पूर्ण कोड आधार अयोग्य दिशा मा जान्छ जो मार्फत भन्ने कि. विकास एक गंदा प्रक्रिया, त्यसैले यसलाई सधैं बाहिर राम्रो बन्द गर्दैन, तर कहिले काँही कि ठूलो breakthroughs छ मात्र तरिका हो.
Sweetbridge मा blockchain को अग्रणी विकासकर्ता, बब Summerville तिनीहरूले सदस्यहरूले नेटवर्क विकास गर्नुपर्छ कसरी निर्णय गर्न अनुमति किनभने काँटाहरू राम्रो हो कि भन्ने विश्वास गर्छ:
त्यहाँ डर को वर्ष भएको, अनिश्चितता, र हार्ड काँटाहरू को जोखिम बारेमा Bitcoin समुदाय भित्र शङ्का. यो कि हल्ला अधिकांश मुक्त बजार र secede गर्ने अधिकार माथि जबरजस्ती र जाच्ने र काटछाट गर्ने कृपा कि समूह आउँदै छ कि मलाई स्पष्ट छ.
त्यहाँ एक रूपमा कुनै यस्तो कुरा हो 'खराब बिभाजनमा।' तपाईं एक टोली वा अन्य मज्जा छैन. प्रयोग र प्रतियोगिता राम्रो. बजार निर्णय गरौं र जहाँ तपाईं मूल्य हेर्न भाग.
को Eth / आदि विभाजित मेरो सबैभन्दा बहुमूल्य सिक्ने अनुभव अल्पसंख्यक चेन कारगर छन् थियो. एक गुप्त समुदाय ठ्याम्मै मिल्दैनथे छ भने, त्यसपछि तपाईं आफ्नो अलग तरिका जान सक्नुहुन्छ, र ठीक छ. तपाईं छोडपत्र प्राप्त र दुवै आफ्नो जीवन संग मा सार्न, बरु सधैंभरि दुःख सँगै बस्ने भन्दा, निरन्तर बहस। "
तर LOOMIA को निर्देशक, शाऊल Lederer दृश्य एक पूर्ण विपरीत बिन्दु छ:
"Bitcoin विभिन्न संस्करणहरू संग बजार Saturating प्रयोगकर्ताहरूलाई भ्रामक छ र त्यहाँ को एक सीमित संख्या हो कि दावी discredits Bitcoins-देखि तपाईं सधैं यो काँटा र आपूर्ति दोहोरो गर्न सक्नुहुन्छ,"टिप्पणी Lederer. "यी स्पिन-ओफ ब्लक आकार सीमा सम्हाल्न कसरी मा Bitcoin समुदायमा एक अपेक्षाकृत सानो squabble देखि फस्टाइरहेका कि के गहिरो troublesome छ छ. बरु एउटा सम्झौता गर्न आउँदै को, समाज, विकासकर्ताहरूले, र कोड विभिन्न समूह मा fracturing छन्। "
Chainalysis - को गुमनाम Bitcoin नष्ट कि कम्पनी
सबै भन्दा विकसित सह मा ...
WO मास्टरकार्ड प्याटेन्ट ...
Blockchain समाचार 03.07.2018
Blockstream शुरूआत ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 11 जनवरी 2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 12 जनवरी 2018